Ra&#039;iisal Wasaaraha Itoobiya oo gaaray jiidda dagaalka | Universal Somali TV
Ra'iisal Wasaaraha Itoobiya oo gaaray jiidda dagaalka
Ra'iisal Wasaaraha dalka Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa Talaadadii gaaray jiidda hore ee dagaalka, si uu u hoggaamiyo Ciidamada Federaalka ee dagaalka kula jira kooxaha fallaagada.
Sida ay ku warantay Warbaahinta dalkaasi, Ra'iisal Wasaaraha ayaa gaaray furinta dagaalka, inkastoo aysan kala caddeyn jiidda ay dagaalka ka gelayaan Abiy Ahmed iyo Siyaasiyiinta Xisbigiisa Barwaaqo ee ku wehlineysa.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa habeenkii Isniinta sheegay in uu ku wajahan yahay furinta dagaalka, isagoo markaasi sheegay inuu dagaalka hoggaamin doono.
Ra'iisal Wasaaraha ayaa dadweynaha Itoobiya ee doonaya inay dalkooda difaacaan ugu yeeray in ay ku soo biiraan Ciidamada Difaaca Qaranka ee jiidda hore ku sugan.
Ra'iisal Wasaare Abiy Ahmed oo sidoo kale ah Abaanduulaha Ciidamada Qalabka Sida ee dalkaasi ayaa bayaan ku sheegay in la gaaray waqtigii Itoobiya loo dhiman lahaa, waxaana uu wacad ku maray in ay wiiqi doonaan kooxaha fallaagada.
Siyaasiyiinta iyo dadka caanka ka ah dalkaasi ayaa taageeray qorshaha uu Ra'iisal Wasaaruhu ku hoggaaminayo dagaalka lagaga hortaggayo fallaagada, isla-markaana ay kaga daba teggi doonaan furinta hore ee dagaalka.
Kan-xigaDoorashada Golaha Shacabka oo maanta ...
Kan-horeTiro Soomaali oo rag iyo dumarba leh ...
63,298,322 unique visits